Masuuliyiinta maxkamada ICC & Liibiya oo ka wada Halday Maxkamadeynta Saif al-Islam – SBC
Masuuliyiinta maxkamada ICC & Liibiya oo ka wada Halday Maxkamadeynta Saif al-Islam
Madaxa Maxkamadaasi Danbiyada Dagaalka ee ICC Luis Moreno-Ocampo oo dhawaan tagay wadanka Liibiya ayaa ka hadlay Kulamo uu wadanka Liibiya kula qaateen qaar ka mid ah madaxda Wadankaasi Liibiya iyaga oo kala hadlayay Maxkamadeynta wiilka Hogaamiyihii hore ee wadanka Liibiya Saif al-Islam Gaddafi.
Mr. Ocampo waxaa uu sheegay in ay isku afgarteen madaxda Cusub ee Liibiya in Saif al-Islam lagu maxkamadeeyo Gudaha wadanka Liibiya isaga oo sidoo kale sheegay inay maxkaamdeynta ku lug yeelan doonan Maxkamadeyntiisa.
Luis Ocampo ayaa ka hadlay in sababta ay u yimaadeen wadanka liibiya ay ugu weyntahay inay goobjoog ka ahaadaan Maxkamadeynta Wiilka Qadaafi sida laga yeelayo isaga oo aan meesha ka saarin in wadanka liibiya uusan lahaynba dhamaanba sharciyada maxkamadaha ee lagu soo taaagi karo dadka gala danbiyada dagaalka.
Madaxda liibiya iyo Madaxda Maxkamada Danbiyada dagaalka Ee Hugea ma sheegin waqtiga Rasmiga ah ee ay bilaaban doonto Maxkamadeynta Saif al-Islam Gaddafi qadaafi oo dhawaan u gacan galay Kooxaha NTC oo wadankaasi kacdoon kaga tuuray hogaankii wadankaasi maamulayay Muddo dhan 42 sanno.
Kooxda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa booqatay Saif al-Islam Gaddafi oo u qiran Maamulka KMG ee wadanka Liibiya iyaga oo sheegay in xaaladiisa caafimaad aad u fiican tahay islamarkaasina uu muuqaalkiisu wanaagsan yahay.
Wan ida salamay mas uu liyinta sbc wat ku mahad san ti hin sida hufan oo umada ugu shaqey nay san sas usii wada dadal kina
oooh maskiin wax udooda malahanba wiilka magaca wanagsan leh ow konbo aya ugu yimaday wadankisa alla ciil badana wuxu raba in an lo naxarisan inaba away yahuud mu maxkamadeyo o sidi waxshinamada ahayd uxasuqday gaza